Badges အကြီးစားတွေနဲ့အတူ Spy Shots တွေထဲမြင်တွေ့လာရတဲ့ 2021 Ford Explorer King Ranch ! – MyMedia Myanmar
Badges အကြီးစားတွေနဲ့အတူ Spy Shots တွေထဲမြင်တွေ့လာရတဲ့ 2021 Ford Explorer King Ranch !
အခုလ အစောပိုင်းလောက်တုန်းကတော့ Spy Photographers တွေရဲ့ ထောက်လှမ်း သိရှိချက်အရ Ford Explorer ရဲ့ ၅ ခုမြောက် မျိုး ဆက်သစ်ကားသစ်ကို Badges အကြီးစားတွေနဲ့အတူ ‌အများ ပြည်သူသုံး လမ်းမတွေထက်မှာ စမ်းသပ်မောင်းနှင်နေတာကို မြင်ခဲ့ရပြီး ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဆိုပါ ကားရဲ့ တစ်ချို့အရာ တွေကိုတော့ မှန်းဆရခက်ခဲနေသေးပြီး King Ranch Badges တွေလည်း ပါဝင် နေသေးလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဆိုရင်တော့ အသစ်ထွက်ပေါလာတဲ့ Spy Shots တွေအရ Badges တွေဟာ King Ranch Model အတွက် ဆိုတာသေချာနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး အဖုံးအကာတွေ မပါတော့တဲ့ အသွင်နဲ့ပါ တစ်ပါတည်း မြင်တွေ့လာရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ အရှေ့ဘက် တံခါးတွေနဲ့ အနောက်ဘက်က Liftgate တွေရဲ့အနားမှာတည်ရှိတဲ့ တံဆိပ်အကြီးစားတွေကို မြင်တွေ့ ခဲ့ရပေမယ့်လည်း Model ရဲ့ အဆင့် မြှင့်တင်ထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ကိုလည်း ဖော်ပြထား နိုင်ခဲ့ ပါသေးတယ်။ Explorer အသစ် အနေနဲ့ကတော့ Explorer Limited Grille တွေကို ယူဆောင်ထားတာ ဖြစ်ပြီး Limited Model ဆီက ဘီးတွေ ကို ပါ ယူဆောင်ပြီး တပ်ဆင်ထားတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။
Photo Credit: motor 1.com
ကားရဲ့ အနောက်ဘက် ပိုင်းမှာတော့ Quad Exhaust Tips တွေ ကိုလည်း Bumper အောက်မှာ တပ်ဆင်ပေးထားပြီး SUV အနေနဲ့ တော့ Ford ရဲ့ Twin-Turbocharged 3.0 Liter V6အင်ဂျင်ကို အသုံး ပြုလာဖို့ များနေတာ ဖြစ်ကာ Platinum ရော ST Trims တွေမှာပါ အတူတူ ဖြစ်လာ နိုင်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ အင်ဂျင်အနေအထား နဲ့အတူ စွမ်းဆောင်ရည် အားဖြင့်တော့ 365 ဒါမှမဟုတ် 400 hp ( 272 သို့မဟုတ် 298 KW ) အထိကို ရှိလာ နိုင်တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ အတွင်းခန်း ပိုင်းမှာ တော့ King Ranch ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Ford ဟာ သားရေ အများအပြားကို အသုံးပြုထည့်သွင်း ပေးထားနိုင်ပြီး King Ranch brand အပိုင်းကိုလည်း Standard Features တွေ အစုံ အလင် ထည့်သွင်း ပေးကာ မြှင့်တင် ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ Ford ရဲ့ King Ranch Model ‌တွေဟာ တက္ကဆက်မှာ ရှိတဲ့ King Ranch တွေ ပုံစံ အတိုင်း တည်ဆောက်ထားမှာ ဖြစ်သလို အခု မော်ဒယ်အသစ်မှာ ဆိုရင်လည်း ယခင် ထက် အတော်လေးများပြားတဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်မှု တွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင် ပေးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ Special Trim ကိုလည်း တပ်ဆင်ပေးလာနိုင်ပြီး Standard ပစ္စည်း တွေကိုလည်း သီးသန့်ထည့်သွင်းပေးလာမှာ ဖြစ်ကာ အခြားသော ထူးခြားတဲ့အရာ တွေကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးထားဦးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် Trim အသစ်မှာ ဆိုရင်လည်း Model ရဲ့ Lineup ထဲမှာ ပါဝင်လာ နိုင်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကတော့ အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေ ပြုလုပ် နေတဲ့ Timberline Trim ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Ford အနေနဲ့ကတော့ အဆိုပါ ကားအသစ်ကို အခုနှစ်ရဲ့ ပထမလေးလပတ် လောက် အတွင်းမှာတင်ပဲ စတင် ထုတ်ဖော်ပြသလာနိုင်ပြီး အဆိုပါ SUV ကားကို အခုလာမယ့် ဆောင်းတွင်း နှောင်းပိုင်း လောက်မှာ တင်ပဲ စတင်ရောင်းချလာဖွယ်ရာ ရှိနေပါတယ်။ အခု King Ranch အမျိုးအစားဟာ Cowboy ဆန်ဆန်အရသာကို အကောင်းဆုံး ပေးစွမ်းနိုင်မယ့် အမျိုးအစားလည်း ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ တော့ Limited Trim ရဲ့ အထက်မှာသာ ရပ်တည်နိုင်တာ ဖြစ်ပြီး ST နဲ့ Platinum Trims တွေနဲ့တော့ အနည်းငယ် နိမ့်နေပါသေးတယ်။ အခုကားကို ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်စေမယ့် အချက်ကို ပြောပါ ဆိုရင်တော့ တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည် နှုန်း ထားကိုပဲ ချပြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The post Badges အကြီးစားတွေနဲ့အတူ Spy Shots တွေထဲမြင်တွေ့လာရတဲ့ 2021 Ford Explorer King Ranch ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-31T17:00:44+06:30January 31st, 2021|MYCARS MYANMAR|